Zimbabwe: Pair Jailed for Fight Over Late Charles Utete’s Farm
April 28, 2021	Comments Off on Zimbabwe: Pair Jailed for Fight Over Late Charles Utete’s Farm
By James Muonwa A long standing ownership wrangle over a farm belonging to late chief secretary to the President and Cabinet, Charles Utete has landed two men in court for malicious damage to property. Andrew Murovi Machingura (39) and Phillip Pasipanodya (age unknown) appeared before Chinhoyi Magistrate Tapiwa Banda Monday …
April 28, 2021	Comments Off on Zimbabweans Fed Up With Political Fights, Want Jobs, Food – Mwonzora
MDC-T president Douglas Mwonzora has said Zimbabweans are fed up with engaging in daily, deadly, and partisan political fights and now yearn for jobs, food, and better medical care. He accused political leaders across the divide of continuing to believe that Zimbabweans were only interested in politics instead of development. …
April 28, 2021	Comments Off on Zimbabwe: Funeral Parade for Copter Crash Victims
By Columbus Mabika A funeral parade to honour two pilots and a technician who died in a helicopter crash in Goromonzi last week will be held by the Air Force of Zimbabwe (AFZ) on Friday. The pilots are Wing Commander Thomas Tinashe Manyowa and Flight Lieutenant Anita Mapiye while the …
Zimbabwe: Mamombe Trial Date Set
April 28, 2021	Comments Off on Zimbabwe: Mamombe Trial Date Set
By Court Reporters The trial date for MDC Alliance’s Joana Mamombe and seven other political activists who are charged with participating in an illegal demonstration sometime in May last year, has been set for next month. Mamombe, Cecilia Chimbiri, Netsai Marova, Lovejoy Chitengu, Stanley Manyenga, Obey Tererai Sithole and Makomborero …
April 28, 2021	Comments Off on Zimbabwe: Lions, Leopards Terrorise Villagers
Page 70 of 11,619« First...4050606869707172»8090100...Last »